Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "mfazi Pope", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "mfazi Pope", iqabane iimvakalelo?
umfazi Noble enxibe emhlophe isigqubuthelo phambi intsika leyo zotywa nelitye azotywe kwi indlela
B "mfazi Pope" get ziphicothwa 3500 yen mahala entsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa kwindawo reverse kunye J i imela nani nto leyo ehleli lo mfazi Pope of the ikhadi bhula. B i "uBhohazi (ubumnyama)", J kuthiwa kuthetha intombi eqhotyoshelwe kwabefundisi bazinxibe imela "Yahin (ukukhanya)", isigqubuthelo emhlophe. Ngenxa yokuba abafazi kwi
Catholic akunakwenzeka na ukuba kwizikhundla eziphezulu umbingeleli ngakumbi, lo mfazi wabanjwa mayingatolikwa abamele anti-Pope. Isandla evela ukuba iTestamente Endala ebizwa ngokuba "Tora", lo mfazi wabanjwa kwaqondwa ukuba kube kwiqondo eliphezulu ulwazi, mfazi Pope kunye ikhadi omela ulwazi wabanumzana, ukuthembeka, kunye sagacity kuye.
indawo umfazi Pope uyakholiswa kukuba iqabane iimvakalelo
umfazi Pope orhanelwa oko kuthethwa ubukrelekrele xa wabonakala kwindawo entle, eqaqambileyo, sonwabe, ezifana noxolo lwengqondo, inzaliseko ngokwasengqondweni njengoko imozulu emehlweni kuthathwa. Iqela ngeemvakalelo umfazi Pope xa anikhuphe isikhundla esifanelekileyo sele kuthathwa njengomntu abakrelekrele kakhulu into yakho. Ndifuna ukuthetha kufutshane, siya mathidala kunye nentloko ingafikeleleki a elungileyo.
umdlali kwimeko zombini iingcinga zabantu ukuthemba izinto zakho, siyaqonda ukuba indlela ekhuselekileyo kakhulu kubantu Tsukiaeru. Kunokuba uthathe inyathelo oqaphelekayo, ucinge ukuba ufuna ukuchitha ngokucotha kunye, kubonakala ukuba bakhetha abo abachitha ngokuzolileyo ngabantu ababini. Ngako oko kutshata nangoku alilunganga, ndiyathemba yaye ndifuna baxabisa ulwalamano lwabo.
Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo kukho amathuba okuba ngokuphosakeleyo ikratshi ngabantu eziphakamileyo izinto zakho. Ngenxa sasicinga kube nzima ukuthetha kwaye ekrelekrele, uye uzame ukuthetha ngakumbi Frank ukuya kwelinye iqela, nceda uzame sizama to'll ukuthoba zokuthethelela kumdlali welinye icala. Abantu ababini ngaphezulu ukuba kunjalo Umgama uncipha.
umfazi Pope of iimvakalelo elikhuselayo
umfazi Pope ngokomfanekiso kaThixo ngokwasengqondweni kwaye ekrelekrele umva indawo bekumele ukuba kuthetha, kodwa uya kanye kuba utshaba uba reverse indawo. Fane kunye ne-clinical, ezifana nochuku, ezifana ukungathembani, simi reverse umfazi Pope ukusuka tilting kucingelwa ukuba sibi. Okanye uzive imbangi angakhululeki nxamnye amazwi abo kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu, okanye kukho i-risk yokuba ngokuziva anaerobic encinane fane yakho.
siqiniseke ukuba uthembe neqabane ukuya magama ukuze beqikelela ukungaqondani nokungathembani kwezinye icala, nceda unike njengoko kuma. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo ukuze Andikholelwa uthando ejolise izinto zakho. Ekubeni sagacity wakho umngcipheko omkhulu leyo ebonakalayo yokuzingca kuba iqabane a ngesondo, nceda wenze kubetha umoya ngobubele njalo wadibana encumile.